Onye ọ bụla na-echezọ ha paswọọdụ na ụfọdụ ebe ma ọ bụrụ na i nwere n'ebe ọ dịghị mkpa na-echegbu onwe. Dabara nke ọma n'ihi na ị Apple nwere ọtụtụ ụzọ na i nwere ike naghachi paswọọdụ gị ọ bụrụ na ọ na-efu. I nwekwara ike na-eduzi mgbake usoro na ndị ọzọ ụzọ karịa otu. Ị nwere ike naghachi paswọọdụ gị na gị na iPhone, iPad, iPod Touch, gị Mac ma ọ bụ ọbụna na a nchọgharị na weebụ.
E nwere Otú ọ dị ọtụtụ ihe na-ego mgbe ị hapụ paswọọdụ gị tupu ị pụrụ amalite masịrị ya. Ụfọdụ n'ime ha na-agụnye;
Ego ọ bụrụ na ị ka na-echeta gị Apple ID. Ọ bụrụ na ị na-eme, ị pụrụ nanị dị nnọọ tọgharịa paswọọdụ gị na ị ga-ọma na-aga.
Ọ bụrụ na ị na-echeta gị Apple ID na paswọọdụ, o yikarịrị otu onye i a na-eji otú na-agbalị iji ihe Apple ID na paswọọdụ abanye na iCloud
Lelee kọmputa enyocha ndị njem igbachi ebe iCloud okwuntughe na-ikpe na-mwute na ị nwere ike na-abanye na-ezighị ezi paswọọdụ otú ahụ.
Ego ma ọ bụrụ na akaụntụ gị kemgbe disables maka nchekwa ihe. Ọ bụrụ na ọ nwere, Apple kwesịrị zitere gị a ozi na-akọwa nke a.
Ọ bụrụ na ị ego niile nke ndị a na ị ka na-enweghị ohere na akaụntụ gị. Ị pụrụ nanị tọgharịa paswọọdụ gị. E nwere ọtụtụ ụzọ i nwere ike ime nke a ma anyị na-aga na-achọ na ụfọdụ ndị kasị ewu ewu.
Olee otú iji tọgharịa echefu iCloud paswọọdụ gị na Apple ID
Soro ndị a dị mfe nzọụkwụ iji tọgharịa gị echefu iCloud paswọọdụ iji gị Apple ID.
Nzọụkwụ otu: On ngwaọrụ gị, ẹkedori Safari na mgbe ahụ gaa iforgot.apple.com
Nzọụkwụ Abụọ: Enweta na Tinye Apple ID, tinye email na enweta ọzọ a na-nri akuku.
Nzọụkwụ atọ: The enweta na Tọgharia site Email.
Nzọụkwụ anọ: Lelee gị mgbake email na soro ntuziaka emi odude ke email iji tọgharịa paswọọdụ gị.
Olee otú agbake echefu iCloud paswọọdụ si Apple
Soro ndị a dị mfe nzọụkwụ naghachi gị iCloud paswọọdụ si Apple.
Nzọụkwụ otu: Gaa Leta Apple ID webpage na gị Mac ma ọ bụ PC. Ọ bụrụ na ị na-adịghị echeta ma paswọọdụ gị ma ọ Apple ID click on "chezọrọ gị Apple ID"
Ọ bụrụ na ị pịa "chezọrọ akaranzuzo gị?" N'elu, ị ga-jụrụ ịbanye gị Apple ID iji tọgharịa paswọọdụ.
Ọ bụrụ na ị chefuru ma, pịa "chezọrọ gị Apple ID?" Ịnọgide.
Nzọụkwụ abụọ: Ị ga-achọrọ ma nyochaa njirimara gị iji ma nche ajụjụ ma ọ bụ email Nyocha. Apple ga-enyere gị na-ahụ gị ID ọ bụrụ na ị chefuru ya site na-arịọ gị iji nyochaa njirimara gị.
Ozugbo gị njirimara e kwupụtara, ị nwere ike mgbe ahụ ike ọhụrụ paswọọdụ. Apple na-achọ na ọhụrụ paswọọdụ na-agaghị e ji ke akpatre 90 ụbọchị. Ị nwekwara ike mkpa ike ngwa kpọmkwem okwuntughe maka ngwa na mkpa iCloud logins. I nwere ike ime nke a site na ịpị "paswọọdụ na Nche" na mgbe "n'ịwa ihe App- Specific paswọọdụ.
A otu oge were naanị rue koodu ga-eme n'ime nke pụrụ ịkpata window. Ị nwere ike iji nke a ngafe koodu na ihe kwesịrị ekwesị ngwa si nbanye.
Ya mere, ihe ma ọ bụrụ na ihe niile ị na-agbalị n'elu adịghị arụ ọrụ? Ị nwere ike ahu nagide a ọrụ dị ka Elcomsoft ekwentị emebi ga-esi n'ime gị iCloud akaụntụ ọbụna ma ọ bụrụ na ị chefuru paswọọdụ gị.
Gịnị Elcomsoft ekwentị emebi nwere ike ime
Elcomsoft ekwentị emebi-enye gị ohere iji nweta gị iCloud ọbụna na-enweghị Apple ID ọ bụ paswọọdụ. Nke a software eme otú ahụ site na-eji nke a ọnụọgụ abụọ Nyocha-iriba-ama na-kere site Apple iCloud Control Panel iji nbanye gị iCloud akaụntụ. Ụfọdụ n'ime Elcomsoft ekwentị emebi si atụmatụ na-agụnye;
Enyere gị aka inweta ohere ka ozi echekwara na paswọọdụ echebe iOS ngwaọrụ
Decrypt iPhone backups na mara paswọọdụ
Dakọtara na niile iOS ngwaọrụ na niile nsụgharị nke iTunes.
Ịchọta na wepụ iCloud backups na Apple ID.
-Enye gị ohere Download mmezi data gị na nso nso naghachi iCloud akaụntụ.
Ọ dị mkpa iburu n'obi Otú ọ dị na naanị Elcomsoft maka Windows na-arụ ọrụ na-agbake okwuntughe. Ọ bụkwa uru arịba ama na ọ bụrụ na gị iCloud paswọọdụ na-achọ a abụọ nzọụkwụ Nyocha usoro, Elcomsoft ekwentị emebi gaghị enwe ike inyere gị aka.
Ọ bụ Otú ọ a bara uru na ọrụ maka ndị na-chefuola ma ha Apple ID na paswọọdụ na-azụ n'ime ha iCloud akaụntụ.
Lelee Elcomsoft n'ebe a; https://www.elcomsoft.com/eprb.html
> Resource> iCloud> chezọrọ iCloud Paswọdu? Ihe na-eme iji nweta ya Back